Waa maxay duufaannada iyo qaababka danabku sidee bay u samaysmaan? Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii waligaa ma aragtay onkod iyo hillaac waxaadna ka mid tahay labada nooc ee dadka ay la soo gudboonaadeen dhacdooyinkan saadaasha hawadu: waad neceb tahay ama waad jeceshahay. Hillaac iyo onkod duufaano wata Badanaa waa ifafaalo cajiib ah oo mudan in lala qabsado kamaradahayaga iyo kaamirooyinka fiidiyaha. Haddii ay dhacaan habeenkii, xitaa way ka sii qurux badan yihiin oo si qurux badan ayay u qurux badan yihiin.
Si kastaba ha noqotee, ma ogtahay sababta ay u dhacaan iyo sida ugu fiican ee aad uga badbaadi karto naftaada? Hadaad rabto inaad waxbadan kabarato duufaanka iyo hillaaca, kani waa boostadaada 🙂
1 Qeexida duufaanka
2 Sideed u abuuri kartaa duufaan?
2.1 Wejiga koowaad
2.2 Marxaladda labaad
2.3 Wejiga saddexaad
3 Duufaan iyo hillaac
4 Sidee danab loo soo saaraa
Duufaantu waa wax aan ka badnayn rabshad rabshadeed oo ka dhacda lakabka jawiga ee lagu yaqaan lahaanshaha roob culus, dabeylo duufaan, hillaac iyo onkod iyo xitaa roobdhagaxyaale mararka qaar. Guud ahaan, waa dhacdooyinka saadaasha hawada ee soconaya muddo gaaban (qiyaastii 20 daqiiqo ama ugu badnaan 1 saac) waxayna saameeyaan oo keliya aag gaar ah.
Duufaantan ayaa si joogta ah uga dhacda meelaha heer kulkoodu hooseeyo ama dhexdhexaad yahay. Diiwaanka adduunka ee aagga ugu dabeylaha badan sanadkii waxaa qaata jasiiradda Java, iyadoo in ka badan 225 maalmood duufaanno iyo hillaac sanadkiiba.
Sideed u abuuri kartaa duufaan?
Waa wax xiiso leh in la arko duufaan hillaac ah ama, liddi ku ah, wax aad khatar u ah haddii aad ku sugan tahay aagagga aan fiicnayn. Duufaanadu waxay samaystaan ​​marka jawigu dhaco cusbooneysiin xoog leh.
Markay hawadu kulushahay ay kacdo, waxay lakulmaysaa lakabyo hawo qabow oo jooggoodu sarreeyo waxayna isku uruursaneysaa daruuro gaagaaban. Daruurahaasi waxay u bilowdaan sidii cumulus humilis wayna ka soo jeestaan ​​muuqaalka cudbigaas suufka leh. Maaddaama xasilooni-darrada jawiga ee ay keento hawada sare ee hadda socota, daruuraha tooska u koraya ayaa isu beddelaya cumulus congestus.
Markay daruurtu aad u weynaato ayaa la odhanayaa cumulonimbus kana soo daa dhammaan biyaha keydsan.
Samaynta duufaan waxaa loo qaybiyaa saddex waji:
Hawada sare ee hawada waxay sababaan daruur daruuro ah inay sameysmaan. ilaa 7.500 mitir oo joog ah. Daruuruhu waxay urursadaan dhibco biyo ah waxayna yeeshaan qaab.
Markay daruurtu sii kororto, waxay gaarayaan dherer dhan ilaa 12.000 oo mitir, iyagoo si ficil ah u deggan gobolka oo dhan. Kala duwanaanta heerkulka ee ka dhexeeya lakabka hoose ee hawada soo socota iyo lakabka joogga halka daruurtu ka samaysan tahay, gudaha gudihiisa ayaa lagu duubi karaa ilaa heerkulka -40 iyo -50 digrii.
Xawaaraha hawada ee sii kordhaya waxay gaari karaan xawaare dhan 100 kiilomitir saacaddii. Markay isku dhacaan daruurta, dhibcaha hawadu waxay wataan gudaha iskuxirka waxayna ku keydsan yihiin dhibco biyo baraf ah, kiristaalo baraf ah iyo xitaa baraf baraf ah, waxay kuxirantahay heerkulka jawiga.
Markay ku hoos dhacaan culeyskooda, waxay ku qaboojiyaan hawada kulul lakabyada hoose sidaas darteed, waxay ka dhigaan mid culus. Markaa waa in hawo hoos u socota lagu sameeyo xawaare qiyaastii ah 50 kiiloomitir saacaddii taasoo dhammaan roobka iyo / ama barafka u qaadda dhulka dushiisa. Tani waa sababta ay inta badan dhibcaha dhibcaha ee ku dhaca duufaanta ay sii weynaadaan.
Markay daruurtu buuxdo dhibco biyo ah oo ay jirto hoos u dhac hawadu, si buuxda u soo dejiso daqiiqado.
Maaddaama daruurtu lumiso biyaha iyo mugga, hawadda soo socota ee joogsata way joogsataa oo daruurtu, qaybta ugu sarraysa, ayay dabayshu ku kala firdhisaa. Tani waa sababta ay duufaanadu sida caadiga ah muddo gaaban yihiin laakiin aad u daran.
Duufaan iyo hillaac
Mid ka mid ah ifafaalaha dhaca xilliyada duufaanta waa hillaac. Raajooyinku waxba maahan laakiin koronto yar ka dhaca gudaha daruurta, inta u dhexeysa daruurta iyo daruurta ama daruur ilaa barta dhulka. Si dogobku ugu dhufto dhulka, waa in kor loo qaadaa oo ay jirtaa curiye ka dhex muuqda inta kale.
Hillaaca xooggiisa ayaa kun jeer ka sarreeya kan hadda aan ku haysanno guriga. Haddii aan karti u leenahay in koronto nalagu xiro markii fiilooyinku soo baxaan, qiyaas waxa ay danab sameyn karto. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado badan oo dad uu ku dhacay danab, way badbaadeen. Tani waa sababta oo ah muddada danabku aad ayuu u yar yahay, sidaa darteed xooggeedu ma ahan mid dilaa ah.
Waxay yihiin fallaadho awood u leh inay faafiyaan ugu yaraan 15.000 kilomitir saacaddii oo qiyaas dheer qiyaastii hal kiiloomitir. Ilaa shan kiilomitir danab dheereeya ayaa lagu duubay duufaano aad u waaweyn.
Dhanka kale, waxaan leenahay onkod. Onkod waa qaraxa sababa dheecaan koronto oo awood u leh inuu gunuunaco muddo dheer sababtoo ah dhawaaqa ka soo baxa daruuraha, dhulka iyo buuraha dhexdooda. Mar kasta oo daruuruhu sii ballaaranaadaan, ayaa marba marka ka dambaysa dhawaaqa dhawaaqa ee dhexdooda dhacayaa sii weynaanayaa.
Sidee danab loo soo saaraa
Hillaaca waxaa si buuxda u matali kara ifafaalaha ka dhaca gurigeenna markaan si khaldan isugu xirno tiirarka togan ee korantada. Markaan sidan yeelno, waxaan gaabinaynaa hoggaanka.
Dhalaalkaas kooban ee aan aragno marka uu sababayo wareegga gaaban ficil ahaan hillaac danab laakiin miisaankiisu yar yahay. Dhacdadani waxay ka dhacdaa inta u dhexeysa daruuraha leh culeys koronto oo ka soo horjeeda. Daruuraha gudihiisa waxaa ku yaal tiirar iska soo horjeed ah oo dhammaadka ah kuwaas oo ku urursan dacwadaha togan iyo kuwa taban iyo daruuraha iyo dhulka dhexdooda.
Markay taasi dhacdo, danabku wuxuu ka dhacayaa daruurta dhexdeeda, inta u dhexeysa daruurta iyo daruurta, iyo inta u dhexeysa daruurta iyo dhulka. Dheecaan kasta wuxuu soconayaa nus ilbiriqsi, inkasta oo uu ku siinayo khayaali ah inuu danab uun yahay, waxaa jira kumanaan soo degsasho ah.
Macluumaadkan waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaato wax badan oo ku saabsan sameynta duufaanno iyo sababta ay u jiraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay iyo sidee ayey u samaysmaan dabeylo iyo danab?